Uthi usephapheme umculi obedla izidakamizwa | News24
Durban - "Sonke sinamadimoni asihlaselayo singazelele, ngokunjalo nengcindezi yabantu esisuke siphila nabo. Ngithi nje ngakho konke okwenzekile ngiyaxolisa kubalandeli bami ngoba bebekholelwa kakhulu kimina."
Lawa ngamazwi omculi obeshisa izikhotha phambilini u-Ishmael Morabe wodumo lweRoba Li Theka awasho engxoxweni ekhethekole abe nayo neLANGA LangeSonto.
Ukhuluma kanjena nje, uphendula umbuzo wokuthi akezuphinda na abagile abalandeli bakhe njengoba esekhuza ibuya engomeni kaShaik Omar entsha ethi Skyline.
U-Ish (njengoba abuye abizwe kanjalo) uphoxe abaningi phambilini edla isidakamizwa i-cocaine kwaze kwaba kuyaphela ngomculo abethandelwa wona.
OLUNYE UDABA: UKelly Khumalo uvumile ukuthi wayedla izidakamizwa - Umbiko
Ugxile kakhulu kulesi sidakamizwa ngesikhathi izinto zimhambela kahle esacula neqembu iJozi alijoyine ngo-2007 emuva kokuhlukana nenkampani ka-Arthur Mafokate i-999 Records.
Ephawula ngokudla kwakhe izidakamizwa uthi ufakwe ngabangani, abanye abengabazi nokubazi abebezidondeza ngoba nakhu edumile.
Echaza ngalokhu eminyakeni edlule uthe ubedla cishe u-R2 000 phakathi nesonto kodwa ngezimpelasonto ibifinyelela ku-R10 000 nokuholele ekutheni aphelelwe yimali, abe wuphuya uqobo.
Uze wazinikela esikhungweni zokuhlunyeleliswa kwezimilo ezama ukuphuma ezidakamizweni. Kugcine ukubikwa ngaye kwabezindaba engasenamsebenzi emculweni futhi esethandana nomculi waphesheya kwezilwandle obesehlala kuleli uPuff Johnson abahlangana naye ngo-2009 eGhetto Ruff. UJohnson wadlula emhlabeni ngo-2013 ebulawa wumdlavuza wesibeletho.
Udaba oluphelele ephephandabeni.